अन्तत: यस्तो रहेछ छवि र शिल्पाको झगडाको मुख्य विउ ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
अन्तत: यस्तो रहेछ छवि र शिल्पाको झगडाको मुख्य विउ !
यो वा त्यो रुपमा सँधैभरि चर्चामा रहने पात्र हुन् चलचित्र निर्माता छविराज ओझा । चलिचत्र निर्माणमा निकै रमेका ओझाको वैवाहिक जीवन भने सँधै उताडचढावपुर्ण रहँदै आएको छ । यस मामलमा भने उनि अभागी देखिएका छन् । फाप र अफापको कुरा गर्ने हो भने यस मामलामा उनिलाई अफाप देखिको छ । पछिल्लो समय छवि ओझा आफ्नो वैवाहिक जीवनकै कारण फेरी एकपटक विवाद र चर्चाको केन्द्रमा तनिएका छन् । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल सँग वुढसकालकमा लगनगाँठो कसेका छविालाई फेरी अर्को आपत आइलागेको छ ।
श्रीमती शिल्पालाई घरेलुहिंसा गरेको भन्दै शिल्पाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अहिले उनिहरुको घर झगडा छताछुल्ल भएको छ । स्रातले दिएको जानकारी अनुसार विगत केहि समय देखिनै शिल्पा र छविको वैवाहिक जीवनम खटपट सुरु भएको थियो । जुन विषय अहिले प्रहरी सम्मनै पुगीसकेको छ । प्राप्त जानकारी अुनुसार छविले शिल्पालाई कानको जाली फुट्ने गरि कुटपिट गरेका थिए । छविको कुटपिटबाट आक्रान्त भएर शिल्पाले घरेलु हिंसको केसमा श्रीमान छवि विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेकी छिन् ।
चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच खटपटको विषय बाहिरिएको छ । लामो अफयेरपछि शिल्पा र ओझाबीच २०७३ सालको दशैँतामा गोप्यरुपमा बिबाह भएको थियो ।अहिले छविले पोखरेललाई आपसी विवादको क्रममा हातपात गर्दा कानको जाली नै फुटेको छ । श्रीमानले आफूलाई हातपात गरी कानको जाली नै फुट्न पुगेको भन्दै पोखरेलले मंगलबार प्रहरीमा शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेकी हुन् ।
हाल शिल्पा चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक विकास रौनियारको घरमा रहेको बताइएको छ । यसबारे बुझ्न शिल्पालाई उनको नम्बरमा फोन गर्दा रौनियार पत्नी तथा निर्देशक सम्झना रौनियार उप्रेतीले फोन उठाइन् । उनले शिल्पाको कानको जाली फुटेको भन्दै बोल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आफूले फोन उठाएको बताइन् ।
ओझाको कुटपिटपछि शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै शिल्पाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएको जानकारी दिँदै थप प्रहरीमै बुझ्न आग्रह गरिन् । यस्तै काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले पनि शिल्पाले उजुरी दर्ता गरेको पुष्टि गरे । श्रीमानबाट असुरक्षा भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा माग गर्दै शिल्पाले उजुरी दर्ता गराएको उनको भनाई छ।
चलचित्र क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार शिल्पाले विकास रौनियारलाई तिहारको टिका लगाएर दाइ मान्दै आएकी छिन् । अहिले उनै दाइको घरमा शिल्पा संरक्षणमा रहेकी हुन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन निर्माता ओझालाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।शिल्पासँग बिबाह गर्नुअघि छविराजका तीन जनासँग बिबाह भइसकेको थियो । शिल्पा चौथो श्रीमतीको रुपमा भित्रिएकी हुन् । स्मरण रहोस्, शिल्पालाई चलचित्र क्षेत्रमा ओझाले नै भित्र्याएका थिए ।
श्रोतका अनुसार शिल्पाले छविसँग डिभोर्स मागेकी छन्।छविले शिल्पालाई ‘लज्जा’ सिनेमाबाट ब्रेक दिएका थिए। त्यसयता उनले छविको ब्यानरमा ‘मंगलम’ तथा ‘हबल्दार सुन्तली’मा अभिनय गरेकी थिइन। सिनेमामा आउनु अघि शिल्पा म्यूजिक भिडियोमा चल्तीकी मोडल थिइन् ।
फर्कीन् चर्चित कलाकार ‘सम्झना बुढाथोकी’ आफ्नै निर्देशनमा तीज गीत लिएर (भिडियो सहित)
कान सुन्न नसक्ने ‘सुजल बम’ अभिनित म्युजिक भिडियो ‘झिमझिम परेली’ (भिडियो सार्वजनिक)
लोक गायक बद्री पंगनीको अर्को रहस्य बाहिरियो, प्रमाणित भए के होला ?
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ‘फेसएप’मा सुरक्षा चुनौती, प्रयोग नगर्न विशेषज्ञहरुको सुझाव
सिके राउतको जीवनीमा आधारित चलचित्र निर्माण हुने (भिडियो सहित)